I-China Factory ngamaxabiso aphantsi i-Samp i-Anti-Slip ye-Anti-Slip ye-Socket mveliso kunye nabenzi | USunnan
Umzi-mveliso oQhelekileyo waBantwana weCotton esendlwini yokuTyibilika kwiTrumpoline Grip Socks
USungnan ubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zeetrampoline park grip socks wholesale. Umzi-mveliso ngokuthe ngqo. Wamkelekile Buza.
Igama lebrand: USUNGAN
OEM / ODM: Ewe
Inombolo yomzekelo: I-SN-S1102
Umbala: Imibala 6 okanye wena
Izinto: Ipholiyesta / umqhaphu
Ubukhulu: 10CM / 12CM / 14CM / 16CM / 18CM / 20CM / 22CM / 24CM / 26CM
Ixesha lonyaka: Intwasahlobo / Ihlobo / Ukwindla / Ubusika
Isini: Amadoda / Abafazi
MOQ: 1200pcs / uyilo / ubungakanani
Faka isicelo kwi: Ukunyusa iikawusi kunye neTrampoline Park
Igama lemveliso Umzi-mveliso oQhelekileyo waBantwana weCotton esendlwini yokuTyibilika kwiTrumpoline Grip Socks
Inombolo yomzekelo I-SN-S1102
Izinto eziphathekayo Ipholiyesta / umqhaphu
Umbala Imibala 6 okanye wena
Ubungakanani 10CM / 12CM / 14CM / 16CM / 18CM / 20CM / 22CM / 24CM / 26CM
MOQ 1200pcs / uyilo / ubungakanani
Ukusetyenziswa Ipaki yetrampoline
I-OEM / i-ODM Yamkela
Isitokhwe Umbala ocacileyo ocacileyo unesitokhwe
Intlawulo I-Paypal T / TL / CD / A
Ifektri ngokuthe ngqo, ngokukodwa kwiisokisi zeminyaka eli-10 +.
Sithumele iiLogo, sinako ukwenza uYilo. Sithumele Uyilo, Sinako Yenza Sample Free.
USunnan iisokisi zetrampolineziye zaphuhliswa ngokukodwa kwimarike yokonwabisa yetrampoline. Sizisa inqanaba lokuyila ngokutsha kweli candelo libalulekileyo lemveliso njengoko kukho izinto ezithile zokusebenza kunye neemfuno ezivela kwingcali yokubamba ipaki.
Ibhalansi nozinzo: Amachaphaza e-anti-skid amachiza endalo aqiniswe ngokuqinileyo, avumela isantya sakho ukuba silungelelane kwaye sizinze kwiindawo ezimtyibilizi ezinje ngemigangatho yethayile okanye iikhaphethi. Iimbaleki ezisikiweyo ezisezantsiiisokisi zetrampolinengamachaphaza aphezulu abicah abonelela ngesithintelo phakathi konyawo lwakho kunye nomgangatho, imethi, izixhobo. Kwangelo xesha, inokukhusela iinyawo kumdaka ongafunekiyo.
Srhoqo kunye Intuthuzelo emangalisayoImixholo yomqhaphu ephezulu kunye nepolyester zibonelela iinyawo zakho ngoluvo lokuthamba lokuthamba ngamandla kunye nokuzolula. Ubungakanani obuphakathi kunye nezinto ezifanelekileyo eziphefumlayo kuwo onke amaxesha onyaka. Ukuqinisekisa ukuhlamba umatshini amatyeli amaninzi kwaye ayinciphisi okanye ikhubazeke. Ukuthuthuzela okumangalisayo kunye nokuziva xa kusetyenziswa kwiitrampolines zomthambo kunye neetampolines zokomelela kwangaphakathi kunye nokuhlaziya.
ISINI: Ilungele abantwana, indoda endala neyasetyhini. Yiba nelastikhi elungileyo, yoluleke, ezi kawusi zetrampoline zibambekayo ziluncedo ekukhuleni okukhawulezileyo kwiintsana, kwaye zigcina ukhuseleko kubantu abadala.
INKQUBO YOKUPHILA KWENKQUBO YOKUSEBENZA: Iikawusi ezigqibeleleyo ezingekho skid ezinokubambelela kwiYoga, iSibhedlele esiDala, iiPilates, ukukhulelwa komama, iBarre, iTrampoline, iZumba, iTai Chi, Rehab, ibhalansi yasekhaya kunye nomzimba, njl.
Inkonzo enkulu yoMthengiUkuba kukho nayiphi na ingxaki esemgangathweni okanye ungonelisekanga malunga neekawusi zetrampoline, nceda unxibelelane nathi, siya kuzama into esinokuyenza ukusombulula ingxaki yakho. Sisoloko silapha ukukunceda. Sijonge phambili kwintsebenziswano nawe.
Egqithileyo I-OEM Anti-Slip Grip Yoga Trampoline Socks Ihowuliseyili
Okulandelayo: I-Bespoke Non Slip Socks Iisokisi zeYoga zoPapasho lweLifu iTrampoline Socks
I-Q1: Ngaba uyazibuza ukuba uyazamkela iiodolo ezincinci?
A1: Ewe, pls zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
I-Q2: Ngaba uza kusizobela umsebenzi wobugcisa?
I-A2: Ewe, sithumele uyilo, siya kwenza ubugcisa kunye nesampulu yokuvunywa kwakho!
I-Q3: Ndingayifaka njani iodolo?
I-A3: Okokuqala tyikitya i-PI, uhlawule idipozithi, emva koko siya kulungiselela imveliso; imali eseleyo ibekwe emva kokuba imveliso igqityiwe, ekugqibeleni siyithumela impahla.
Q4: Liliphi ixesha lesampulu?
I-A4: Ngeentsuku ezingama-3-5.
Q5: Yeyiphi indlela yokuhlawula?
A5: Samkela i-T / T, i-PayPal, i-Western Union, i-L / C.
iisokisi zetrampoline ezenzelwe wena
itrampoline yokubamba iikawusi
iisokisi zetrampoline park